Khabiirka Cilmiga: Sida loo sameeyo Inta badan SEO iyo Inter Xiriir
Suuqgeynta digital waa hawl adag. Muddo sanado ah, moobiilka suuq-geynta ee digital-ka ah ayaa isbeddelaya una shaqeynaya xeelado cusub. Internetku waa guddi caadi ah oo shirkado badani ay ka faa'iidaystaan ​​inay gaaraan dadka dhagaystayaasha ah. SEO wuxuu inta badan ka walwalsan yahay taraafikada cusub, maamulka bogga iyo darajada bogga oo ah ereyo muhiim ah oo muhiim ah, kuwaas oo ah kuwo aad loo raadin karo.
Dhinaca kale, xirfadlayaasha xiriirka dadweynaha waxay u shaqeeyaan farsamooyin kala duwan oo isgaarsiinta iyo suuq-geynta suuq-geynta taas oo noqonaya qaab SEO ah iyo darajo - simulateur fiche de paie. PR waxay u maleyneysaa haysashada liisaska warbaahinta ee faahfaahsan. Xirfadayaasha PR waa saxafiyiinta, websaydhiyaadka iyo wariyeyaasha. Waxay ku gaaraan dhagaystayaashooda iyaga oo isticmaalaya mawduucyo la taaban karo, mawduucyo xiiso leh iyo kaqeybqaadashada qoraalladooda.
Labadan gooboodba way ku biiri karaan gacmahana way wada shaqeeyaan si kor loogu qaado shaqada midba midka kale. Falanqaynta SEO wuxuu ku xiran karaa dadaalka xirfadlayaasha PR oo awood u siinaya in ay gaaraan macaamiisha suurtagalka ah ee suurtogalka ah. Dhinaca kale, isku-darka liisaska PR wuxuu ka caawin karaa kooxda SEO inay dhisto dhagaystayaasha cusub ee la beegsanayo waxayna sameystaan ​​content-ka internetka oo ah mid sare oo ka mid ah matoorada raadinta.
Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt Adeegyada Digital, Michael Brown wuxuu sharxayaa sida labada kooxoodba u wada shaqeyn karaan.
Waxbarashada Midba Midka kale
Khabiirada SEO waxay leeyihiin waayo-aragnimo weyn oo ku saabsan suuq-geynta suuq-galinta sida qodobbada muhiimka ah, raadinta isku-xirka iyo horumarinta shabakadda. Xirfadayaasha PR waxay leeyihiin ololeyaal kale oo ku lug leh isgaarsiin ballaaran oo warbaahin ah, horumarinta xiriirka hay'adaha warbaahinta iyo farsamooyinka farsamooyinka gaarka ah, kuwaas oo awood u siinaya inay abuuraan liis wanaagsan email. Iyagoo wada shaqeynaya, kooxda SEO waxay bartaan sida shirkadaha warbaahinta u shaqeeyaan iyo sidoo kale ka faa'iideysiga ka-qaybgalka abuuray ololayaasha PR. Kooxaha PR waxay bartaan sida loo helo erayada muhiimka ah ee mugga raadinta iyo sidoo kale abuuritaanka blogs la fududeeyay.
Kala-xulashada Backlinks adoo adeegsanaya caymiska PR
PR wuxuu leeyahay karti ah inuu wado dhagaystayaasha si uu u sameeyo guji, gaar ahaan badhanka taleefanka gacanta. Inta badan xidhiidhada PR ma ahan kuwo la filayo inay ugu horreyn ku yeeshaan saameyntooda. Iyadoo loo marayo daboolista labada dhinacba, labadan kooxood waxay soo saari karaan taageerooyin awood leh. SEO waxay ku lug leedahay doorashada xulashada. PR waxaa ka mid ah xulashada macluumaadka halka ay SEO ka caawiso heysashada farriimaha PR ee farsamaynta ee isku dhafan si loo eego mashiinka raadinta ugu fiican.
Qeybta Shaqada iyo Takhasuska
Iskudhafeynta PR iyo SEO ayaa kaa caawin kara isbedelka diiradda kooxaha. Kooxda SEO waxay bartilmaameed u tahay kor u qaadida macaamiisha dadka badan, PR wuxuu diiradda saaraa maareynta war baahinta oo ballaaran. Iyada oo loo marayo takhasuska, kooxda SEO ayaa ka shaqeyn karta horumarinta waxtarka tayo sare leh, saamiyada bulshada iyo adeegsiga ereyada muhiimka ah iyo dhabarka si wax ku ool ah si kor loogu qaado liiska qaybta blog ama boggaaga.
Abuuritaanka ballaarin ballaaran oo internetka ah iyada oo la adeegsanayo internetka waxay aad ugu tiirsan tahay saameynta farsamooyinka SEO. Isla markaa, khabiirada PR waxay leeyihiin saameyn aad u weyn oo ku saabsan abuurista content kaas oo ku soo jiidi doona dareenka dad badan. In la dhiso xiriir wadaag ah oo udhexeeya kooxaha SEO iyo PR ayaa ka dhigi kara isugeynta raadinta mashiinka raadinta. Labada kooxood waxay isbeddeli karaan liisaska emailkooda si ay u ballaadhiyaan oo ay u sameeyaan sii ballaadhan kuwaas oo faa'iido u leh labada kooxood.